Isihlungi se-china Spinning mesh isihlungi se-BOPP se-BOPP% vinyl process process line Manufacture and Factory | Hanke
Isihlungi se-mesh esiphotha i-BOPP isihlungi se-BOPP% vinyl process process line
Izinga lokuhlunga elisebenza kahle
Ukugqwala okuhle, ukumelana nokushisa nokucindezela
Isihlungi se-Spinning mesh saziwa nangokuthi izihlungi ze-BOPP / izihlungi ze-extruder, kufaka phakathi isihlungi sokuphotha, i-spin pack nendandatho, esetshenziselwa umugqa wokukhiqiza we-BOPP. IHanke inganikeza zonke izinhlelo zokuhlunga zomkhiqizo we-BOPP.
Ukukhiqizwa kwepulasitiki kudinga ukwenziwa kwezinga eliphakeme phakathi kwabakhiqizi nabathengisi bemishini. AbakwaHanke bayakwazi ukuhlanganisa izidingo zokukhiqizwa kokuhlunga kwe-polymer okuyisisekelo nemibono emisha nezintsha yokwengeza izixazululo zokuhlunga.Singanikeza amasethi ezihlungi zokuphotha ukukusiza ukuthi ukhiqize i-polymer esezingeni eliphakeme futhi wehlise izindleko zakho zokukhiqiza.
Isici sesihlungi sokuphotha
Lesi sihlungi siyisihlungi esise-cylindrical esinezikhalazo zokuthuthukisa izinga lokuhlunga.senziwe nge-mesh wire mesh evame ukusetshenziswa lapho kungena khona uketshezi kushiye iziqukathi noma ingxenye.Ihhole lemicu yocingo iyahluka ngesihlungi esithile ngenkathi i-wire mesh filter filter isusa ngokwejwayelekile kuphela izinhlayiya ezinkulu zokungcola kusuka kuketshezi.
Sizokwenza ngezifiso izihlungi ngokuya ngezidingo zamakhasimende ngosayizi ohlukile ukusuka kosayizi ojwayelekile kuya kosayizi o-oda okhethekile.
Izinga lokuhlunga: 1-200micron
Iphakethe lokuhlunga le-Spinning / extruder
Ukuhlanganisa izihlungi eziningi ezinamasayizi ahlukahlukene onqenqemeni / usebe, sinikeza izihlungi ezibonisa amandla aphezulu nokusebenza kahle okuphezulu.
Sinezinto ezahlukahlukene zokufa kwabezindaba kufaka phakathi isihlungi esinesimo esijwayelekile sombuthano futhi umshini ucindezela ngokuma kwendandatho nohlobo lwethrekhi lomshini wokufa.
Ukuhlunga kwephekhi yokucaciswa
Amaphakethe wokuhlunga avame ukwenziwa ngomugqa omuhle wokuhlunga kanye nemeshini ekhanyayo yokuxhasa.
Izimo Yezikrini ze-Spin Pack:
Amaphakethe we-1.Round Shaped: Ububanzi 25 kuya ku-600 mm (noma ngokwezifiso)
I-2.Toroidal Shaped: Ububanzi bangaphakathi obungu-18 mm kuye ku-250mm
Ububanzi obungaphandle 50mm kuye ku-350mm
3.Rectangular Shaped: ububanzi 30mm ukuze 100mm, ubude 60mm kuya 400mm (noma njengoba egcizelele)
4.Slitting Belt: ububanzi ubuncane 30mm
5.I-Cylinder Shaped: ububanzi obungaphakathi kusuka ku-8mm kuye ku-600mm
6.Square Shaped, Oval Shaped, olunye uhlobo lokuhlunga
Izinto Insimbi engenasici, insimbi ephansi yekhabhoni, ithusi, ingxubevange, njll
Izinga lokuhlunga 1-200micron
Rim / onqenqemeni SS ,, Al, ithusi noma ngaphandle komphetho, ngegebe noma cha
Ukubopha I-Spot ishiselwe noma nge-rim
Hlunga imidiya Nokwelukiweyo wocingo noma anezikhala sintered
Amasongo ahlala enziwe nge-aluminium noma ngensimbi engagqwali
kabanzi ezimbonini zepulasitiki ze-PP, i-PS, i-PVC, i-PET ne-Chemical Fibers njll.
Langaphambilini Isihlungi sekhandlela lekhandlela le-Sintered ukusebenza kahle okukhulu
Olandelayo: Insimbi engagqwali wire anezikhala nokwelukiweyo micro wire anezikhala zokuhlunga
Isici sesihlungi se-Spinning
Amaphakethe Wesihlungi Esiphotha
Isihlungi se-Mesh Spinning
Ukuphotha I-Wire Mesh
Isihlungi se-Fibre Spinning
Hlunga i-mesh pack extruder mesh disc nge-diff ...